चीनमा ह्याक गर्न नमिल्ने इन्टरनेट नेटवर्क लन्चको तयारी – Vision Khabar
चीनमा ह्याक गर्न नमिल्ने इन्टरनेट नेटवर्क लन्चको तयारी
। ११ आश्विन २०७४, बुधबार १२:५६ मा प्रकाशित
एजेन्सी , जिङ । संसारभरमा साइबर हमलाका बढ्दो घटना र खतराकाबीच चीनले ह्याक गर्न नमिल्ने ‘अनह्याकेबल’ इन्टरनेट नेटवर्क लन्च गर्ने तयारी गरेको छ । यो इन्टरनेट नेटवर्क ह्याक गर्न सजिलो हुने छैन भने कसैले ह्याकिङ गर्न खोजेको समेत तत्काल पत्ता लाग्नेछ ।
यो नयाँ प्रविधिलाई ‘क्वान्टम क्रिप्टोग्राफी’ भनिन्छ र पारम्परिक क्रिप्टोग्राफीभन्दा बिल्कुल फरक मानिएको छ । चीनको सरकारी मिडियाका अनुुसार जिनान प्रान्तमा यसबारेमा भइरहेको कामलाई ‘माइलस्टोन’ अर्थात कोशेढुंगा भनिएको छ । चीनलाई पश्चिमी देशमा लगानी गर्नबाट हमेशा डर पैदा भएका कारण चीनले नयाँ इन्टरनेट नेटवर्क समेत लञ्च गर्ने तयारी गरेको हो । जिनानमा निर्माण भइरहेको यो नेटवर्कमा सेना, सरकार, वित्तीय संस्थान र विद्युत विभागसँग जोडिएका करिब २ सय कर्मचारीले आफ्नो सन्देश सुरक्षित रुपमा पठाउन सक्नेछन् र त्यो सन्देश सम्बन्धित व्यक्तिले मात्रै पढ्न सक्नेछन् । क्वान्टम कम्युनिकेशनमा चीन अघि बढ्नुको अर्थ उसले अब यस्तो सफ्टवेयर बनाउनेछ, जो अहिलेको कमजोरी हटाएर त्यसलाई मजबुत पार्नेछ र भविष्यमा अन्य देशले समेत चीनसँग यस प्रकारको सफ्टवेयर खरिद गर्न सक्नेछन् ।
यदि तपाईले इन्टरनेटबाट सुरक्षित तरिकाले सन्देश पठाउन चाहनुहुन्छ भने पारम्परिक एन्क्रिप्शन सन्देश पढ्नका लागि आवश्यक की (चाबी) लाई गणितको कठिन आंकडाका रुपमा लुकाउन सक्नुहुनेछ । तर गणितको कुरा गर्दा कठिनको परिभाषा के हो ? यसको अर्थ तपाईले तिव्र रुपमा नम्बरको ठूलो संयोजनका बारेमा सोच्नुपर्नेछ । २०१७ को कुरा गर्ने हो भने यसको मलतब हो, एक छिटो र राम्रो कम्प्युटर । जसरी कम्प्युटरलाई राम्रो बनाउँदै गएको छ, नम्बरमा आधारित एन्क्रिप्शनमा यो संयोजन समेत केही कठिन बनाईदै छ । एन्क्रिप्शनको पनि एउटा सीमा छ र विस्तारै विस्तारै यो तरिका पनि कमजोर हुँदैछ । क्वान्टम कम्प्युटर बनेपछि नम्बरलाई सानो बनाउने प्रविधिमा ठूलो परिवर्तन आउने र यसबाट आधुनिक एन्क्रिप्शन सफ्टवेयरलाई थप मजबुत गर्न सकिनेछ ।
क्वान्टम कम्युनिकेशनले अलग रुपमा काम गर्छ–
– यदि तपाई सुरक्षित सन्देश पठाउन चाहनुहुन्छ भने अलग्गै चाबी पनि पठाउनुपर्नेछ । त्यो पनि लाइट पार्टिकलका रुपमा ।
– यसपछि तपाई वास्तविक सन्देशलाई एन्क्रिप्ट गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ । सन्देश पाउनेले पहिले नै पाएको चाबीका माध्यमबाट सो सन्देश खोलेर पढ्न सक्नेछ ।
– क्वान्टम चाबीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यदी कसैले लाइट पार्टिकल्सलाई पढ्न् कोशिस गरेपनि स्वरुप परिवर्तन नगरी सम्भव हुदैन । यदि चाबी अर्थात पासवर्ट परिवर्तन गरेमा सन्देश पनि नष्ट हुन्छ ।
– यसको अर्थ सन्देश पठाउने र पाउने दुवैले कुनै प्रकारको ह्याकिङको कोशिस समेत तत्काल पत्ता लाग्छ । त्यसकारण यसलाई ‘अनह्याकेबल’ भनिएको हो ।
अब प्रश्न उठ्न सक्छ कि क्वान्टम कम्युनिकेशन वास्तममा इन्टरनेटमा पठाउने सन्देश यति सुरक्षित बन्दछ भने चीन सबैभन्दा अघि किन छ ? लण्डन इम्पिरियल कलेजका प्राध्यापक म्युंगशिक किम भन्छन्, ‘लामो समयसम्म मानिसहरुलाई यसको आवश्यकता महशुस भएन ।’ उनी बजारमा यो प्रविधिको माग हुन्छ या हुँदैन भन्नेबारेमा समेत धेरै जानकारी नभएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘आजको समयमा सन्देशलाई एन्क्रिप्ट गर्नका लागि नम्बरको जुन व्यवस्था थियो त्यो यति शानदार थियो कि कसैले नयाँ प्रविधिको प्रयोगका बारेमा सोच्दै सोचेन ।’ यस विषयमा पहिलेदेखि नै सोध भने भइरहेको थियो । तर चीन यसको विकास र प्रयोगमा अघि देखिएको छ । यो प्रविधिबारे पहिले काम गर्नेमध्ये एक भियना विश्वविद्यालयमा क्वान्टम फिजिसिस्ट प्रोफेसर एन्टोन जेलिंगर भन्छन्, ‘युरोपले पहिले नै यसको प्रयोग गर्ने मौका गुमायो ।’ उनका अनुसार सन् २०१४ मा युरोपेली संघले यस बारेमा विश्वास दिलाउने कोशिस गरेको थियो । उनी भन्छन्, ‘अब युरोप यो मामलामा पछि परिसकेको छ र यस कारण हामी अब बराबरी गर्न सक्दैनौं ।’ अहिले पनि अमेरिका र युरोपमा क्वान्टममा आधारित नेटवर्कबाट काम भइरहेको छ तर यिनीहरुमा अधिकतर शोधमा आधारित छन् र व्यवसायिक संस्थामा आधारित छैनन् ।
एउटा कठिनाई भनेको जिनान नेटवर्क जसरी कार्यक्रम चलाउनु धेरै महंगो काम हो । यदि यसले बजार पाएन भने सरकार र लगानीकर्ताका लागि आर्थिक सहयोग पाउनु पनि धेरै कठिन हुनसक्छ । सिंगापुरको नेशनल युनिभर्सिटीको सेन्टर फर क्वान्टम टेक्नोलोजीका व्यालेरियो स्करानी भन्छन्, ‘हामीले मान्नुपर्छ कि चीनले यस काममा लगानी गरिरहेको छ । उ आर्थिक रुपमा बलियो छ र उनीहरुसँग जनता छन् जो कि सायद अमेरिकी सेनासँग बाहेक अरु कसैसँग पनि छैनन् ।’ चीनले जो क्वान्टम कम्युनिकेशन सफ्टवेयर बनाइरहेको छ, त्यसमा केवल जिनान नेटवर्क मात्रै होइन । गत वर्ष चीनले केबल तारबाट नाप्न सकिने स्थानमा क्वान्टम नेटवर्कको परीक्षण गर्नका लागि एक उपग्रह छाडेको थियो । देशका दुई मुख्य सहर बेइजिङ र शांघाईबीचको एक लिंक पनि बनाएको थियो । ताकी यसको परीक्षण गरी ह्याकिङ पत्ता लगाउन सकियोस ।
अहिले क्वान्टम कम्युनिकेशनले भविष्यमा पारम्परिक स्थान लिन्छ यो लिदैन अहिले नै यसबारेमा स्पष्ट भन्न कठिन छ । तर यसको प्रयोग गर्नेहरुलाई लाग्छ कि यसको प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना छ । यो प्रविधिको निर्माण गर्ने र यससँग सम्बन्धित सफ्टवेयर बनाउने र परीक्षण गर्नेमा चीन सबैभन्दा अघि भएको छ । प्रोफेसर जेलिंगर भन्छन्, ‘प्रविधिले आफ्नो बजार आफैं खोज्छ ।’ जब चिनियाँ कम्पनीले यो प्रविधिलाई बजारमा उतार्दा सबैभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय बैंक नै यसलाई खरिद गर्न अघि आउनसक्छ ।